Nhazi & Ndi ndu - WRSP
AKWỤKWỌ KWESỊRỊ WRSP
(Mahadum nke Helsinki)
(Center for Studies on New Religions)
(University Texas State)
(Mahadum nke Turin)
(University Loyola, New Orleans)
NDỊ NKWUKWU NDỊ NKWUKWU NDỊ MERE
Marian Apparitional na Nkwupụta Iche iche
Ndị otu Marian Apparitional and Devotional dị iche iche na-eweta profaịlụ nke ihe atụ nke ọtụtụ puku ndị otu Marian na ndị otu ofufe nke gosipụtara n'akụkọ ihe mere eme, na-emesi ndị dị n'oge a ike.
Ndị na-ahụ maka ngalaba:
Joseph Laycock (University Texas State)
Ije Ozi na Omume na Ụwa
Okpukpe na mmeghari nke ime mmụọ na ihe nkiri
Okpukpe na mmegharị nke mmụọ na ihe ngosi Visual Arts na-enye profaịlụ nke otu okpukperechi ohuru nke metutara ihe nlere na ndi mmadu ndi ha na ha jikotara otu ma obu ndi otu okpukpe ohuru ma obu ndi ozo. ọrụ dị mkpa.
Massimo Introvigne (Center for Studies on New Religions)
Obodo nke ime mmụọ na nke ọhụụ bụ ọrụ pụrụ iche nke gbasara omume okpukpe, nke ime mmụọ, na nke ọhụụ nke na-eme ka ndụ dịrị ndụ. Ọrụ a gụnyere obodo nke oge gara aga ma ugbu a site n'akụkụ nile nke ụwa.
Timothy Miller (Mahadum Kansas)
Ụmụ nwanyị nọ n'okpukpe na nke ime mmụọ
Ọrụ nke Women in the World Religions and Spirituality Project bụ ịkụziri ndị mmadụ banyere onyinye dị ukwuu ndị inyom na-eme ma mee na mmepe nke okpukpe na ọkwa zuru ụwa ọnụ. E nwere profaịlụ banyere ndị inyom na ndị ndú, òtù okpukpe na mmegharị nke ụmụ nwanyị na-arụ na / ma ọ bụ na-arụ ọrụ, ọrụ ndị inyom na-arụ ọrụ na òtù okpukpe na ọdịnala ụfọdụ, na esemokwu banyere ụmụ nwanyị n'okpukpe.
Rebecca Moore (Mahadum San Diego State University)
Catherine Wessinger (University Loyola, New Orleans)
NDỊ NKWUKWU NDỊ MGBE ACHỤKWU NDỊ ỌZỌ
Omenala Okpukpe na nke ime mmụọ nke Australia
Omenala Okpukpe na Okpukpe nke Ọstrelia dere akwụkwọ dị iche iche nke ọdịnala okpukpe n'Australia site na otu nchịkọta akụkọ nke okpukpe na nke ime mmụọ nke sitere na Australia.
Carole M. Cusack (Mahadum Sydney)
Usoro omenala okpukpe na nke ime mmụọ nke Canada
Usoro omenala nke okpukpe na nke ime mmụọ na-edepụta ihe dị iche iche nke ọdịnala okpukpe na Canada site na nchịkọta akụkọ nke okpukpe na nke ime mmụọ ndị sitere na Kanada.
Hillary Kaell (University Concordia)
Ọdịdị Ime Mmụọ na Okpukpe Italian
Usoro nke ime mmụọ na nke okpukpe Ịtali na-etolite profaịlụ na ndị mmụọ na nke okpukpe dị iche iche nke na-ewere ọdịdị dị iche n'Ịtali na mmegharị ụlọ nke na-anọchite anya ụdị dịgasị iche iche dị n'okpukpe okpukpe Italian.
Dr. Stefania Palmisano (Mahadum nke Turin)
Okpukpe ọhụrụ nke Japanese na ọdịnala pere mpe
Okpukpe Okpukpe na nke ndị Japan na-akọwapụta ọtụtụ okpukpe ọhụrụ na, n'ihi nha ha, akụkọ ihe mere eme, ike na ihe omume ha, bụ ndị ama ama na ọnọdụ ndị Japan na ndị otu okpukpe ndị ọzọ na-enye ụzọ ọzọ ịgbaso na okwukwe na isi.
Ian Reader (Mahadum Manchester)
Erica Baffelli (Mahadum Manchester)
Birgit Staemmler (University of Tubingen)
Okpukpe na Ime Mmụọ na Russia na Eastern Europe [Na-abata]
Okpukpe na Ime Mmụọ na Russia na Eastern Europe Project na-ede akwụkwọ dịgasị iche iche nke ọdịnala okpukpe na Russia na n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Europe site na nchịkọta akụkọ banyere okpukpe na nke ime mmụọ nke sitere na mpaghara a. Ihe profaịlụ bu ihe akwukwo banyere akwukwo banyere okpukpe na Russia ..
Dr. Kaarina Aitamurto (Mahadum nke Helsinki)
Dr. Maija Penttilä (Mahadum nke Helsinki)
Emeritus Program Directors:
John C. Peterson (Mahadum nke Missouri)